Home News Maxeey tahay Sababta Rasmiga ah Ee Kheeyre Khilaaf uga dhex Abuuray Xildhibaanadda...
Maxeey tahay Sababta Rasmiga ah Ee Kheeyre Khilaaf uga dhex Abuuray Xildhibaanadda iyo Jawaari!!
Sida muuqata waxaa Golayaasha dowladda Federaalka Soomaaliya ka dhex socda dagaal siyaasadeed oo u dhexeeya shakhsiyaad, balse ay ujeeddadu ka fog tahay inuu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanadda ka mid noqday dowladdan uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa xiligii ay ku jireen ololahooda ka mid noqoshada Golaha Baarlamaanka waxaa la sheegaa in tiro badan oo ka mid ahi ay ku waayeen Boqolaal Kun oo Doolar oo ay ku bedesheen kursiga Golaha Baarlamaanka DFS.
Xildhibaano badan ayaa weli ku cataabaya inay kharashkii badnaa ee kaga baxay xubinimada Golaha baarlamaanku ay meesha ka saartay inay ka tabci doonaan Dowladda FS xoolo ka tiro badan maaliyadii ay kharash gareeyeen.
Sanadkii la soo dhaafay way adkeyd in Xildhibaanadu mooshin ka keenaan dowladda Farmaajo, sababtoo aheyd waxaa ku soo jeeday indhaha bulshadda oo la dhacsanaa waxay u arkeen daacadnimadda Madaxweyne Farmaajo iyo kalsoonida buuxda ee uu ku qabay Raysal Wasaarihiisa.
Dhowr goor ahay isku dayeen Xildhibaanadu inay ruxruxaan oo mooshin ka keenaan Raysal Wasaare Kheyre, balse mar walba waxaa hor taagnaa wacyiga wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed ay rajadda uga qabeen in aan la gacgacmo gacmeyn maamulka wanaagsan ee Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha kalsoonidu ka dhexeyso.
Raysal Wasaare Kheyre wuxuu mar walba isha ku hayey cadaawadda kaga soo burqaneysay xubno ka mid ah Golaha aqalka Hoose ee Baarlamaanka oo ay ugu horeeyeen kuwa ay wadaagaan nidaam beeleedka ee isu arkayey inay kaga haboon yihiin iyagu xilka uu Kheyre fadhiyo.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari oo ah khabiir la soo shaqeeyey dowladihii ka horeeyey tan maanta jirta ayaa noqday Kabtanka kala hagayey mooshinka ku wajahnaa Raysal Wasaare Kheyre.
Mudane Jawaari iyo Raysal Wasaare Kheyre ayaa dad xogogaal ahi sheegeen inay ku kala boodeen shir hoosaadyo ay keligood isugu tageen qol afar Mitir ah, kulamadaas oo aan la ogeyn waxa ay kaga wada hadleen, balse laga dareemayey in cadaawadi uga korordhay ishor-fariisigoodaas.
Wixii xiligaas ka danbeeyey ayaa la sheegayaa in Guddoomiye Jawaari uu cagta cagta u saaray mooshinka Kheyre in dabka loo shido, isla markaasna si gaadmo ah loo horkeeno kalfadhigan hadda furmay.
Raysal Wasaare Kheyre oo Labadiisa indhood mid ka mid ahi aysan weligeed ka jeesan dhaqdhaqaaqa Xildhibaanadda Baarlamaanka ayaa ogaaday in seeftii Guddoomiye Jawaari loo soo tumay ay qoortiisa dul saaran tahay, maxaa dhacay markaas ka dib?
Waa xiligii ay faa’iideysan lahaayeen Xildhibaanadii kharashka badani kaga baxay kursiga Golaha Baarlamaank iyagoo isticmaalaya “cayri caymo ma diido” , waana wakhtigii uu Raysal Wasaare Kheyre oo lagu xanto inuu yahay nin ku gacan adag bixinta lacagaha uu hurgufi lahaa jeebkiisa ilaa uu ka soo dhaco shilinka ugu danbeeya.
Sidaas awgeed, dagaalka siyaasadeed ee ka socda masraxa Baarlamaanka DFS waa mid murqo tuujis ah oo ugu danbeynta gaaray “Qaniinyaa Qaniinyo Kaa Fujisa”